Otu esi eweghachi njikọ netwọk na Mac network Emulator.online ▷ ulator
Otu esi eweghachi njikọ netwọk na Mac
Apple Macs na MacBooks bụ ezigbo kọmputa mara mma ile anya ma debe n'ọfịs ma ọ bụ na tebụl anyị, kamakwa, n'ịma mma ha na izu oke ha, ha ka bụ kọmputa, yabụ ha nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ ma nwee ike inwe nsogbu njikọ. mfe ma ọ bụ obere mfe iji dozie.
Ọ bụrụ na anyị achọpụta na Mac anyị na njikọ Internetntanetị na-abịa ma na-aga, ibe weebụ anaghị emepe n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ ngwa ndị na-eji ọrụ Internetntanetị (dị ka VoIP ma ọ bụ ngwa mkparịta ụka vidiyo) anaghị arụ ọrụ dị ka ha kwesịrị, ị ruru nduzi kwesịrị ekwesị: ebe a n'ezie anyị ga-ahụ niile na usoro, mfe na ngwa ngwa itinye ọbụna maka a novice ọrụ, ka weghachite njikọ netwọk na Macya mere ị nwere ike ịlaghachi na nbudata na bulite ọsọ ọsọ ị hụrụ tupu nsogbu ahụ amalite wee laghachi ọrụ ma ọ bụ ịmụ na Mac gị dịka ọ nweghị ihe mere.
G ALKWUO: Ngwọta maka nsogbu rawụta na nsogbu njikọ wifi
Otu esi eweghachi njikọ Mac
Iji weghachite njikọ na Mac anyị ga-egosi gị ma ngwaọrụ nyocha nke dị na sistemụ macOS ozugbo ị dị njikere iji yana ụfọdụ aghụghọ ọkachamara ka njikọ Internetntanetị wee rụọ ọrụ ọzọ dị ka a ga - asị na anyị amalitela Mac maka oge mbụ.
Jiri nchoputa ikuku
Ọ bụrụ na nsogbu njikọ ahụ emee mgbe ejikọtara anyị na netwọk Wi-Fi, anyị nwere ike ịnwale iji ngwa ọrụ ahụ Nchọpụta ikuku ikuku nke Apple nyere n'onwe ya. Iji jiri ya, gbaa mbọ hụ na ijikọ na netwọk Wi-Fi, pịa ma jide Nhọrọ (Alt), ka anyị gaa na ọnọdụ Wi-Fi dị n’elu elu aka nri wee pịa Mepee nchọpụta nsogbu wireless.
Anyị na-abanye na nzere nke onye nchịkwa akaụntụ, mgbe ahụ anyị na-eche ka ngwá ọrụ iji mepụta ndenye ego ya. Dabere na nsonaazụ, windo nwere ike mepee yana ụfọdụ ntụnye ịgbaso, mana windo nchịkọta nke arụmọrụ ndị Mac rụrụ iji weghachi njikọ ahụ nwekwara ike ịpụta. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ adịghị adị (ahịrị abịa wee laa), windo yiri ihe ndị a nwekwara ike ịpụta.
N'okwu a ọ bụ ihe amamihe iji rụọ ọrụ olu Jikwaa njikọ Wi-Fi gị, ịhapụ ọrụ nke ịlele njikọ na Mac, nke mere na ọ nwere ike itinye aka na nsogbu. Imeghe isiokwu Gaa na nchịkọta kama nke ahụ, anyị ga-enweta nchịkọta gbasara ozi gbasara netwọkụ anyị yana ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere gị aka itinye n'ọrụ.
DNS bụ ọrụ dị mkpa maka njikọ andntanetị yana, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na akara ahụ na-arụ ọrụ zuru oke ma jikọọ modem ahụ, o zuru ezu na ọrụ a na-egosi nrụrụ aka (dịka ọmụmaatụ, n'ihi nkwụsị nke DNS nke onye ọrụ) iji zere njikọ n'oge niile. weebụsaịtị.
Iji lelee ma nsogbu ahụ metụtara DNS, mepee menu WiFi O Ethernet na elu aka nri, pịa ihe ahụ Mepee usoro netwọta, ka anyị gaa na njikọ nọ n'ọrụ n'oge a, pịa Advanced wee mesịa gaa na ihuenyo ahụ DNS.
Anyị ga-ahụkarị adreesị IP nke modem ma ọ bụ rawụta anyị, mana anyị nwere ike ịgbakwunye ihe nkesa DNS ọhụrụ site na ịpị akara ngosi + dị na ala na ịpị 8.8.8.8 (Google DNS, na-arụ ọrụ mgbe niile). Mgbe ahụ, anyị na-ehichapụ ochie DNS nkesa na-ugbu a na pịa na ala na dịkwa mma, iji jiri ihe nkesa anyị họọrọ. Matakwu anyị nwekwara ike ịgụ ntuziaka anyị Etu esi agbanwe DNS.
Hichapụ network ntọala na mmasị faịlụ
Ọ bụrụ na nchoputa Ikuku na DNS agbanwebeghị nsogbu njikọ ahụ, anyị nwere ike gbalịa ihichapụ nhazi netwọk dị na sistemụ ahụ, iji megharịa ohere ịnweta Wi-Fi netwọk ejiri ruo ugbu a. Iji gaa n'ihu, gbanyụọ njikọ Wi-Fi dị ugbu a (site na nri Wi-Fi dị n'elu nri), mepee Finder na Dock mmanya na ala, gaa na menu O, anyị ga-emeghe Gaa na nchekwa na anyị na-ede na-eso ụzọ.
/ Ọba akwụkwọ / Mmasị / Ntọala sistemụ
Ozugbo folda a mepere, hichapụ ma ọ bụ bugharịa faịlụ ndị a na Recycle Bin na Mac:
Anyị na-ehichapụ faịlụ niile, wee malitegharịa Mac maka mgbanwe ndị a ga-arụ. Mgbe ị na-agbanyeghachi, anyị na-anwa ijikọ na netwọk Wi-Fi ọzọ, iji chọpụta ma njikọ ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ndụmọdụ ndị ọzọ bara uru
Ọ bụrụ na anyị edozighị nke a, anyị kwesịrị inyocha n'ihu, ebe enwere ike inwe esemokwu na-anaghị emetụta Mac ma metụtara modem / router ma ọ bụ ụdị njikọ anyị na-eji jikọọ ya. Iji gbalịa idozi ya, anyị gbalịrị ndụmọdụ ndị enyere na ndepụta ndị a:
Ka anyị malitegharịa modem ahụ- Nke a bụ otu n'ime ndụmọdụ dị mfe, mana ọ nwere ike dozie nsogbu ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ ejikọrọ na otu netwọkụ nwekwara nsogbu yiri ya na Mac. Ighagharị ga-enye gị ohere iweghachite njikọ ahụ ngwa ngwa n'emeghị ihe ọ bụla.
Anyị na-eji njikọ Wi-Fi 5 GHz- Macs niile nke oge a nwere njikọta abụọ ma ọ ka mma iji ụyọkọ 5 GHz na-eme ihe mgbe niile, na-enweghịkarị nnyonye anya na netwọkụ ndị dị nso na ngwa ngwa ọ bụla. Iji mụtakwuo anyị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị Esemokwu dị n'etiti netwọk 2,4 GHz na 5 GHz Wi-Fi; nke ka mma?
Anyị na-eji njikọ Ethernet: usoro ọzọ dị ngwa iji ghọta ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ na njikọ Wi-Fi gụnyere iji eriri Ethernet dị ogologo, ka ị nwee ike jikọọ Mac na modem ahụ site na ụlọ dị iche iche. Ọ bụrụ na njikọ ahụ arụ ọrụ, nsogbu ahụ dị na modul Wi-Fi nke Mac ma ọ bụ Wi-Fi modul modem, dịka a hụkwara na ntuziaka ahụ. Ngwọta maka nsogbu rawụta na nsogbu njikọ wifi.
Anyị na-ewepu Range Extender ma ọ bụ Powerline: Ọ bụrụ na anyị jikọọ Mac site na Wi-Fi Extender ma ọ bụ Powerline, anyị na-anwa ikpochapụ ha ma jikọọ ozugbo na netwọk modem ma ọ bụ jiri eriri Ethernet. Ngwaọrụ ndị a bara ezigbo uru, mana ha nwere ike iwebiga oge ókè wee gbochie njikọ ịntanetị gị ruo mgbe ewepụrụ ha ma jikọta ha mgbe nkeji ole na ole gachara.
Site n'itinye ndụmọdụ niile enyere na ntuziaka a, anyị ga-enwe ike idozi ọtụtụ nsogbu njikọ Mac n'onwe anyị, na-enweghị ịkpọ onye ọrụ kọmputa ma ọ bụ gbanye akụrụngwa ọzọ wee banye nzuzu n'etiti otu puku puku ihe mgbagwoju anya ma sie ike iji soro na Weebụ.
Ọ bụrụ na, n'agbanyeghị ndụmọdụ dị na ndu ahụ, njikọ netwọk anaghị arụ ọrụ na Mac, ọ nweghị ihe fọdụrụ ịme kama ịmalite usoro mgbake mgbe ịchekwaa faịlụ nkeonwe na USB mpụga mbanye; gaba n'ihu na mweghachi dị na-agụ anyị na-eduzi Esi edozi Mac, Idozi Okwu MacOS na Njehie mi 9 ụzọ Malitegharịa ekwentị gị na Mac ma weghachi kwesịrị ekwesị mmalite.
Huawei ekwentị Mmepụta oyiri Nyefee Data na faịlụ na Smartphone ọhụrụ
Etu esi eji PC abuo nwere ihe ngosi (HDMI switcher)
Ejikọtara m na Wi-Fi mana anaghị m eme nchọgharị: gịnị ka m ga-eme?
Etu esi enyocha mkpuchi 5G
Ngwọta ma ọ bụrụ na gam akporo Wi-Fi agaghị ejikọ na netwọk ma ọ bụ ntanetị
Etu aga agbanwe DVD na Fire TV Stick
Etu ị gha esi hazie ọdụ Vodafone
Etu ị ga-esi weta Internetntanetị na ala ọ bụla na akuku ụlọ
Kekọrịta njikọ ikuku na-enweghị iji eriri olu
Mepụta netwọ VPN iji kpọọ simenti n'ịntanetị
Ochie paswọọdụ na nnabata maka ndị na-anya ụgbọ elu ọ bụla
Hazie nhazi ngwa ngwa n'ọdụ ụgbọ mmiri na rawụta imeghe ọdụ ụgbọ mmiri nkwukọrịta
Njikọ desktọpụ dị anya site na iPhone / iPad na kọmputa gị